ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 1200MB - ၁၆၉၉ကျပ်
အကန့်အသတ်မဲ့ Free Fire ဒေတာ + 1200MB ဒေတာ
Dr. Plague Costume နှင့် Legendary Gun Skin Box ကူပွန်ကုဒ်
*2299# မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor Appမှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 500MB - ၆၉၉ကျပ်
အကန့်အသတ်မဲ့ Free Fire ဒေတာ + 500MB ဒေတာ
Gun Skin Box ကူပွန်ကုဒ်
*2288# မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor Appမှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
MyTelenor App သို့မဟုတ် USSD ဝယ်ယူပြီး မိနစ် ၃၀ အကြာတွင် ကူပွန်ကုဒ်ကိုပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးမပြုရသေးသည့် ကူပွန်ကုဒ်များကို ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက်မတိုင်ခင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 1200MB data pack
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 1200MB data pack ဒေတာပတ်ခ် ဆိုတာဘာလဲ ?
Dr. Plague (ရာသက်ပန်), Midnight Mafia (ရာသက်ပန်၊ ၇ရက်၊ ၃ရက်၊ ၂၄နာရီ), Spirited Overseers (ရာသက်ပန်၊ ၇ရက်၊ ၃ရက်၊ ၂၄နာရီ), Tropical Parrot (ရာသက်ပန်၊ ၇ရက်၊ ၃ရက်၊ ၂၄နာရီ), War Academy (ရာသက်ပန်၊ ၇ရက်၊ ၃ရက်၊ ၂၄နာရီ) ကူပွန်ကုတ်များ
ရရှိလာတဲ့ ကူပွန်ကုဒ်တွေကို ဘယ်လိုလဲလှယ်ရမလဲ ?
https://mm.ff.garena.com/ တွင် ကူပွန်ကုတ်ကို Gun Skin များဖြင့်လှဲလယ်နိုင်သည်
၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက်မတိုင်ခင်
Free Fire အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်သည် အခြား ဂိမ်းအတွင်း in-game update/download လုပ်ခြင်း , Facebook, Youtube Videos (or any အခြား third party အသုံးပြုမှု) များအတွက်အသုံးပြုလို့ရပါလား ?
ရရှိသည့် ဒေတာ ၁၂၀၀MB ကို FREE FIRE ဂိမ်းမှာပဲသုံးလို့ရတာလား?
ရရှိသည့် ဒေတာ ၁၂၀၀MB ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာတွင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 1200MB ဒေတာပတ်လက်ကျန်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ?
ဒေတာပတ်လက်ကျန်ကို MyTelenor App ထဲတွင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Free Fire ကို ဒေတာမကုန်ဘဲ free ဆော့ရန်ဘာလိုအပ်မလဲ။
Free Fire ကို ဒေတာမကုန်ဘဲ free ဆော့ရန် ပိုပိုရအပီဝုန်း Free Fire ဒေတာပတ်ကို ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပြီး ဖုန်းဘေလ်လက်ကျန် အနည်းဆုံး ၃၀၀ ကျပ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၅ရက် မှ ၂၀၂၁ မတ်လ ၃၁ ရက်ထိ
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 500MB data pack
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 500MB data pack ဒေတာပတ်ခ် ဆိုတာဘာလဲ ?
တယ်လီနောသုံးစွဲသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး MyTelenor App သို့မဟုတ် USSD *2288# မှတဆင့် ဒေတာ 500MB + Free Fire အကန့်သတ်မဲ့ဒေတာ ၇ရက်စာကို ၆၉၉ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူရင်း Free Fire Gun များအား အခမဲ့ ကံစမ်းရယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
Victory Wings(ရာသက်ပန်၊ ၇ရက်၊ ၃ရက်၊ ၂၄နာရီ), Party Animal(ရာသက်ပန်၊ ၇ရက်၊ ၃ရက်၊ ၂၄နာရီ), Cosmic Bounty(ရာသက်ပန်၊ ၇ရက်၊ ၃ရက်၊ ၂၄နာရီ) ကူပွန်ကုတ်များ
MyTelenor App သို့မဟုတ် USSD *2288# မှ ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 500MB + အကန့်သတ်မဲ့ Free Fire ဒေတာ ၇ရက်စာ ကို ၆၉၉ကျပ်တည်းနှင့်ဝယ်ယူပြီး ကူပွန်ကုတ်ရယူနိုင်သည်။
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 500MB Pack ကို ဝယ်ယူပြီး Suboo ဒေတာကို သက်တမ်းတိုးလို့ရပါသလား?
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 500MB ကို ဝယ်ယူလျှင် လက်ကျန် Suboo ဒေတာ မှာ ပေါင်းသွားမလား?
လက်ကျန် Suboo ဒေတာ တွင် ပေါင်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။
ရရှိသည့် ဒေတာ ၅၀၀MB ကို FREE FIREဂိမ်းမှာပဲသုံးလို့ရတာလား?
ရရှိသည့် ဒေတာ ၅၀၀MB ကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာတွင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 500MB ဒေတာပတ်လက်ကျန်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ?